Outlook Express Fitaovana fanamboarana. Outlook Express Amboary ny rindrambaiko.
DataNumen Outlook Express Repair no tsara indrindra Outlook Express fitaovana fanamboarana sy fanarenana eto amin'izao tontolo izao. Afaka manamboatra ny mpanao kolikoly izy io Outlook Express DBX sy MBX fisie ary avereno indray araka izay tratra ny mailaka alefanao, amin'izay hampihena ny fatiantoka ao amin'ny kolikoly fisie.
Fanamarihana: Azafady azafady DataNumen Outlook Repair hamerenana ireo mailaka sy zavatra hafa avy amin'ny rakitra Outlook PST maloto.
Nahoana DataNumen Outlook Express Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe an Outlook Express vokatra fanarenana data. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Outlook Express Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Outlook Express Repair mifoka ny fifaninanana
Fandikana tsy miankina sy fampandrosoana ny tranokala
Farany - vokatra manao izay lazainy miaraka amin'ny fomba tsy misy hadalana sy ny vokatra mahafinaritra. Vita tsara! Maniry hahita ny vokatrao aho taloha
Soa ihany fa nanana ny fisie dbx rehetra tamin'ny back-up aho tamin'ny 19 Nov ary ny sisa rehetra dia
Nampiasa ny kinova demo an'ny DOER -
Nividy aho DataNumen Outlook Express Repair ary sitrana soa aman-tsara ireo fisie ao anaty fampirimako izay nanjavona tamin'ny lisitry ny OE. ny
Vahaolana momba ny kaonty Manager Express
Hafa noho ny zavatra kely sasany,
Nanana lost mailaka manan-danja mandritra ny fizotran'ny fampifanarahana ary tsy nahalala ny fomba hahitana azy ireo na hanokatra azy ireo indray. Ny vokatrao dia namaha ny famoahana
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Fanohanana mba ho sitrana Outlook Express 4 mbx fisie ary Outlook Express 5/6 dbx fisie.
Tohano hamerenana ireo rakitra dbx sy fisie mbx amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano hanamboarana antontan-taratasy dbx sy fisie mbx.
Tohano hanamboatra rakitra dbx sy mbx hatramin'ny 4GB, hahafahany manamboatra rakitra dbx miaraka amin'ny olana 2GB.
Fanohanana mba ho sitrana Outlook Express angona avy amin'ny temporary fisie .dbt.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra dbx na mbx hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra dbx miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
Tohano ny fantsom-pifandraisana (DOS prompt), mba hahafahanao miantso an'i DOER avy amin'ny programa.
mampiasa DataNumen Outlook Express Repair mamerina Outlook Express mailaka
Outlook Express mitahiry ny mailaka rehetra ao anaty rakitra .dbx. Ohatra, ny rakitra Inbox.dbx dia misy mailaka ao anaty Inbox, ny rakitra Outbox.dbx dia misy mailaka ao anaty Outbox, sns.
Raha misy rakitra .dbx simba ary tsy afaka miditra amin'ireo mailaka ao anatiny ianao dia afaka mampiasa DataNumen Outlook Express Repair hamerina azy ireo ny mailakao. Ireo mailaka sitrana dia voatahiry ho rakitra .eml izay azo ampidirina mora foana indray Outlook Express.
Tadiavo ny rakitra .dbx na .mbx maloto amboarina raha mbola tsy nanao an'izany.
Fanamarihana: Alohan'ny hanamboarana ny rakitra dbx na mbx maloto DataNumen Outlook Express Repair, fenoy azafady Outlook Express ary ny rindranasa hafa mety manova ny fisie.
Safidio ny rakitra dbx na mbx maloto hanamboarana:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny dbx na mbx filename na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitana ny rakitra dbx na mbx hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen Outlook Express Repair hamoaka ireo hafatra sitrana rehetra ao amin'ny lahatahiry xxxx_recovered, izay xxxx no anaran'ilay rakitra dbx na mbx maloto. Ohatra, ho an'ny rakitra Inbox.dbx, ny lahatahiry output default dia ho Inbox_recovered. Raha te hampiasa lahatahiry hafa ianao, dia azafady araho araka izany:
Tsindrio bokotra, DataNumen Outlook Express Repair starfanarenana mailaka avy amin'ny fisie dbx na mbx maloto. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha misy hafatra azo averina soa aman-tsara avy amin'ny fisie dbx na mbx dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 24 Desambra 2020
DataNumen Outlook Express Repair Navoaka tamin'ny 2.3 Novambra 9 ny 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 28 septambra 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 7 Jolay 2009
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 29 Janoary 2009
DataNumen Outlook Express Repair Navoaka tamin'ny 1.5 desambra 6 ny 2006